आफ्नै सरकार र खेलकुदको नजरमा नपरेका टेण्डी! | Hamro Khelkud
आफ्नै सरकार र खेलकुदको नजरमा नपरेका टेण्डी!
‘शायद अब ऊ पुरानै अवस्थामा फर्कन्न भनेर होला धेरैले चासो राख्नै छोडिसके’, ८० वर्षे लामा पासाङ शेर्पाले पछिल्लो एक वर्षको पीडादायी भोगाइलाई सुस्केरा हाल्दै सुनाए ।
नाम्चेमै हुँदा शेर्पा दम्पत्तीका २ छोरा जन्मेका थिए । किसान संठगनम सक्रिय हुँदा शेर्पाको परिवार सल्लेरी बसेको थियो । टेण्डी र छोरीको जन्म सल्लेरीमै भएको थियो । २०३२ सालबाट भने शेर्पाको परिवार स्थायी रुपमै काठमाडौंमा रहँदै आएको छ । टेण्डी दुई पटक अनेरास्ववियूबाट अमृत साइन्स क्याम्पसको स्ववियू सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए ।
यति भनिरहँदा बाबु शेर्पालाई कति गाह्रो भयो होला, मैले अनुमान मात्र गर्न सके । मेरा पनि आँखा ओभाना रहेनन् । धन्न हामी फोनमा बोलिरहेका थियौै जसले गर्दा शेर्पाले मेरो अवस्था अनुमान गर्न सकेनन् होला, कारण हामी पहिलो पटक बोलिरहेका थियौं । तर, उनको हरेक शब्द र भावमा टेण्डीको नियति मात्रै हैन समग्र नेपाली खेलकुद र यसमा लाग्ने खेलअधिकारीको नियति छचल्किरहेको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस : गुमनाम टेण्डी !